Dubartii mana lammii Eertiraa imaanaan waggaa 20'f eegan kirreessaa waliin haadha manaaf kennuufi - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, SHASHE NEGUSE
Aadde Shaashituu Nigusee jiraattuu magaalaa Gondariiti. Jalqabarratti Gondar ganda sadi keessa jiraataa kan turan yoo ta'u, boodarra garuu mana bitatanii gara ganda biraa jijjiirratan. Yeroo sanitti hojjattuu mana murtii turan.
Yeroos qabduu qarshii hoteelaa kan turan lammiin Eertiraa Aadde Migib Tamasgeen duraan ganda afur keessa kan jiraatan yoo ta'u, boodarraa garuu lafa argataniin gara ganda Dabir Berhaan Sillaaseetti mana ijaarratan. Ollummaan dubartoota lameenii achitti jalqabe.
''Yeroo mana haaraatti galan namnis gandis haaraa namatti ta'us, dhimmoota hawaasummaa keenya waliin raawwachuun waan baratamedha,'' jedhu Aadde Migib.
Ollummaasaanii osoo haalaan hin jabaatiin siyaasni Itoophiyaa fi Ertiraa jiddutti ture akkasaan gargara bahaniif sababa ta'e. Aadde Migib mannisaan ijoollee sadi keessatti dahanii itti guddisanii, ollootasaanii waan gaarii fi hamaa waliin dabarsan dhiisanii deemuun ulfaataa akka ture dubbatu.
Aadde Migib Gondar keessatti waggoota 20'f jiraataniiru. Itoophiyaatti dahanii haadha ijoollee ta'aniiru. Haala siyaasaa yeroo sanitti tureen dirqamanii lammiileen Eertiraa gara biyya keessanii galaa waan jedhamaniif qabeenyasaanii dhiisanii gara biyyasaaniitti deebi'an.
Yeroo Adde Migib ganda sadi jiraatan san baay'ee walitti dhiyaanna ture jedhu Adde Shaashituun. Yeroo ganda afur jiraatanis namoonni kabajanii fi jaalatan heddu turan.
Hakiima hawaasa isaa gargaaruuf barsiisaa tahe
Barsiisonni caalaatti kabajaa kan argatan eessatti?
Ta'us garuu tasa iddoo jiraatan gad dhiisanii akka gara biyyasaanii deeman taasifaman qabeenyasaanii ollaasaanitti adaraa jedhanii yeroo deeman dhiyeenyatti kan beekan Adde Shaashituu turan.
Yeroon sun rakkisaa waan tureef Aadde Migib qabeenya kiyya osoo hin jedhin ture kan deeman waan ta'eef meeshaaleesaanii haalaa ol kaa'uun itti gaafatamummaa Aadde Shaashituu ture.
Meeshaaleen manaa muraasni gurguramanii muraasni immoo obboleettiisaanii Finfinnee jiranii fi ijoolleesaanii Itoophiyaatti hafaniif akka kennamu dhaamanii turan Aadde Migib.
Hirbuusaanii eeguun Adde Shaashituun itti gaafatamummaasaanii haalaan eeguu dubbatu.
Yeroo Aadde Migib gara biyyasaaniitti deebi'an hojjattaa mana murtii hawaasummaa akka waadaasaanii argu godhanii turan.
Walitti dhufeenyisaanii ollummaarra kan darbe ta'uu baatus Aadde Shaashituun waadaa Aadde Migib'f galan eeguun har'a ga'aniiru.
Meeshaalee muraasa immoo ollaasaniif akka kennamu gaafatanii turan waan ta'eef akkuma gaaffiisaanii ollaadhaaf akka kennamu godhameera. Mannisaanii lafa kaaree meetira 200 irratti kan qubate dubbatu.
Ijaarsi manasaanii yeroo sanitti 'Amooraa Kinfi' jedhamee beekamuu kun kutaalee kiraadhaaf ta'an biroo lama qaba jedhu.
Aadde Shaashituun yeroo sanirraa jalqabee maallaqa kaa'uuf ture. Dabir Berhaan Sillaaseetti kiraan manaa mi'aa miti.
Ta'us garuu maallaqa mana kiraa maqaa ilmasaanii Itoophiyaatti argamuun kaa'uu dubbatu. Yeroo isaan gara Itoophiyaa dhufanitti maallaqa san itti kennuusaanii dubbatu.
Haala kanas akka yaadatan Adde Migib BBC'f mirkaneesaniiru.
Baasiin mana ilaallatu, gibira waggaa kaffalanii, bishaan Aadde Migib galfachuuf galmaa'anii deeman Adde Shaashituun akka galchaniif ni dubbatu.
Maallaqa kiraa manaa yeroodhaa gara yerootti kennan dabalatee hamma ammaatti qarshii kuma 60 kaa'uusaanii dubbatu Aadde Shaashituun.
Aadde Migib yeroo tokko dhaqanii manasaanii ilaalanii turan. Yeroo manasaanii dhiisnaii deeman deebi'ee mana kiyya argadha jedhee yaadanii akka hin beekne dubbatu.
Asiin duras manasaanii fi ollaasnii du'arraa hafan yeroo arganitti gammachuu yeroos ture hin dagatan. Mannisaanii osoo hin gurguramin jiraachuusaattiin gammachuunsaanii daangaa akka hin qabne dubbatu.
"Waadaa lafarratti natti kennan eegee akka deebisu Rabbiin kadhadha ture," jedhan Aadde Shaashituun.
Aadde Migib manasaanii fudhatanii jireenyasaanii jiraachuu akka barbaadan dubbatu. Ijoolleensaanii manasaani itti dhalatan haatisanaii jiraacahuuf karoora qabaachuusaanii yeroo dhagahan yaadasaanii akka deeggaran dubbatu.
Isaan ijoolleesaanii gaafachuuf yeroo gara Ameerikaa deeman san manasaanii akka eeganiif ollaasaaniif adaraa jedhan deemaniif mana Adde Migibis bakka bu'ummaa kennaniif deemuusaanii ni yaadatu.
Adde Shaashituun itti gaafatamummaa itti kenname san haalan eeganii asiin gahuuf bu'aa bayii heddu keessa akka darban dubbatu.
Lamaansaaniituyyuu ijoolleesaanii gaafachuuf isheen takka Minisootaa isheen biroo immoo Daalaas jiraataniis bakkasaanii jiran deemanii wal gaafachuusaanii nutti himaniiru.
Hawaasa isaa gargaaruuf jecha hakiima boronqii qabate